Wajeer ilaa Scotland: Qaxwaha caanaha geela Soomaalida leh ee Yurub laga cabo - BBC News Somali
Image caption Qaxwo lagu caddeeyay caano geel laga dhoofiyay Wajeer ayaa haatan laga heli karaa Scotland
Haweeney reer Wajeer ah ayaa noqday qofkii ugu horreyay ee caanaha geela u dhoofiya Yurub.
Qoys ku sumoobay caano ay cabeen
Image caption Faadumo Cusmaan Axmed, oo ka mid ah haweenka caanaha geela u dhoofiya Scotland
" Waxaa na soo booqday hay'ado kala duwan, waxay naga aruuriyeen warbixinno iyo xog kuwaas oo ku shaaciyey website-yada, halkaas ayaana macaamiisha ka helnay." Ayey tiri Faadumo
Mashruucan waxaa iska kaashanaya maqaayadaha shaha iyo qaxwada ee Galsgow iyo hay'adda Mercy Corps.
Soomaalida ku nool geeska Afrika aya si weyn u isticmaala caanaha geela, iyadaao takhaatiirtu iyo saynisyahannada ay sheegeen inay leeyihiin faa'idooyin caafimaad oo weyn.
"Caanaha geela waxay daaweeyaan cudurro badan sida xanuunada kansarka, sonkorta iyo dhiig karka, sidoo kale caanaha geela ma halaabayaan haddii ay muddo yaalan, waxaana laga helaa faa'idooyin badan oo aanan laga helin xoolaha kale, fa'iidooyinka gaarka ah ee aan aniga ka helay iibinta ama suuq gaynta caanaha ayaa ah inaan hadda hormar ku tilaabsannay oo aanan joogin meeshii aan ka bilaawnay, horaan baannaanka ayaan ku iibin jirnay balse hadda waxaan ku howlgalnaa xarun iyada oo ay hay'ad noo balanqaaday inay noo dhisto xarun weyn," ayay tiri Faadumo Cismaan oo u warramaysay laanta af Soomaaliga ee BBC.
"Waxa la rabaa in wax soo saarkaada aad u samaysid ama aad ka fikirtid sidii aad suuqyada kale ee caalamka aad u gayn lahad, dhibaatooyin badan ayaa ka hor yimaada maadama aysan badanaa dadkan haysan taageero dhanka dowladda ah taasi oo niyad jab ku ah, balse haddii la raaco sharciyada waxaan aaminsanahay in wax soosaarka la gayn karo suuqayada kale ee Caalamka," ayay raacisay hadalkeeda Faadumo.